တာလီဘန်ထိုးစစ် ချက်ချင်းရပ်ပစ်ဖို့ ကုလတောင်းဆို
အာဖဂန်နစ်စတန်နိုင်ငံနဲ့ နိုင်ငံသားတွေ ကောင်းစားရေးအတွက် စစ်ဆင်ရေးတွေ ချက်ချင်း ရပ်ပြီး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်ဖို့ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှုးချုပ် Antonio Guterres တာလီဘန်တွေကို သောကြာနေ့မှာ ပန်ကြားလိုက်ပါတယ်။
တာလီဘန်တွေ အနေနဲ့ ထိုးစစ်ဆင်နေတာကို ချက်ချင်း ရပ်ပစ်ဖို့နဲ့ အာဖဂန်နိုင်ငံနဲ့ သူ့ပြည်သူတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွါးအတွက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်ဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ Qatar နိုင်ငံ Doha မှာ အာဖဂန်အစိုးရနဲ့ တာလီဘန်တို့အနေနဲ့ ဒေသတွင်းနဲ့ နိုင်ငံတကာအသိုင်းဝိ်ုင်းရဲ့ ထောက်ပံ့ကူညီမှုနဲ့ ဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်ပြီး ပဋိပက္ခတွေ ပြေလည်စေမယ့် ညှိနှိုင်းမှုလမ်းကြောင်းပေါ် ပြန်လျှောက်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့် ကြောင်း ပြောသွားတာပါ။
စစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုလမ်းကြောင်းဟာ ပြည်တွင်းစစ်အဓွန့်ရှည်ကြာဖို့ ဖြစ်လာနိုင်တာ ဒါမှမဟုတ် အထီးကျန်အာဖဂန်နစ်စတန်နိုင်ငံ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကို နိုင်ငံတကာ အသိုင်းဝိ်ုင်းကလည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောထားပြီး ဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြောပါတယ်.
တာလီဘန်တွေဟာ အာဖဂန်နစ်စတန်နိုင်ငံတွင်းက ပြည်နယ် ၃၄ ပြည်နယ်ရဲ့ မြို့တော်တွေထဲက ထက်ဝက်လောက်ကို သိမ်းပိုက်ထားပြီ ဖြစ်သလို ကာဘူးလ် မြို့တော်ကိုပါ သိမ်းဖို့ လုပ်နေတာတွေ့ရတဲ့ အတွက် အာဖဂန်နိုင်ငံရဲ့ အခြေနေဟာ ဆိုးလာနေတယ်လို့ လည်း အတွင်းရေးမှုးချုပ်က ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မြို့ကြီးပြကြီးတွေမှာ ပဋိပက္ခဆက်ဖြစ်နေ တာဟာ ပြည်သူအများအပြား သေကြေ ဒဏ်ရာရဖို့ ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ သတိပေးလိုက်ပြီး ပါဝင် ပတ်သက်နေသူတွေ အားလုံး အရပ်သားတွေကို အကာကွယ်ပေးကြဖို့ပါ တောင်းဆိုလိုက်တာပါ။
အာဖဂန်နစ်စတန်မှာ ဖြစ်ပွါးတဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့ တလအတွင်း အရပ်သား ၁၀၀၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့ရပြီး လူပေါင်း ၂ သိန်းခွဲလောက် အိုးအိမ်စွန့်ခွါထွက်ပြေး နေကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အာဖဂနျနဈစတနျနိုငျငံနဲ့ နိုငျငံသားတှေ ကောငျးစားရေးအတှကျ စဈဆငျရေးတှေ ခကျြခငျြး ရပျပွီး ညှိနှိုငျးဆှေးနှေးမှုတှေ လုပျဖို့ ကုလသမဂ်ဂအတှငျးရေးမှုးခြုပျ Antonio Guterres တာလီဘနျတှကေို သောကွာနမှေ့ာ ပနျကွားလိုကျပါတယျ။
တာလီဘနျတှေ အနနေဲ့ ထိုးစဈဆငျနတောကို ခကျြခငျြး ရပျပဈဖို့နဲ့ အာဖဂနျနိုငျငံနဲ့ သူ့ပွညျသူတှရေဲ့ အကြိုးစီးပှါးအတှကျ ညှိနှိုငျးဆှေးနှေးမှုတှေ လုပျဖို့ တောငျးဆိုပါတယျ။ Qatar နိုငျငံ Doha မှာ အာဖဂနျအစိုးရနဲ့ တာလီဘနျတို့အနနေဲ့ ဒသေတှငျးနဲ့ နိုငျငံတကာအသိုငျးဝိုငျးရဲ့ ထောကျပံ့ကူညီမှုနဲ့ ဆှေးနှေးမှုတှေ လုပျပွီး ပဋိပက်ခတှေ ပွလေညျစမေယျ့ ညှိနှိုငျးမှုလမျးကွောငျးပျေါ ပွနျလြှောကျနိုငျမယျလို့ မြှျောလငျ့ ကွောငျး ပွောသှားတာပါ။
စဈရေးတိုကျခိုကျမှုလမျးကွောငျးဟာ ပွညျတှငျးစဈအဓှနျ့ရှညျကွာဖို့ ဖွဈလာနိုငျတာ ဒါမှမဟုတျ အထီးကနျြအာဖဂနျနဈစတနျနိုငျငံ ဖွဈသှားနိုငျတယျဆိုတာကို နိုငျငံတကာ အသိုငျးဝိုငျးကလညျး ရှငျးရှငျးလငျးလငျး ပွောထားပွီး ဖွဈကွောငျးလညျး ပွောပါတယျ.
တာလီဘနျတှဟော အာဖဂနျနဈစတနျနိုငျငံတှငျးက ပွညျနယျ ၃၄ ပွညျနယျရဲ့ မွို့တျောတှထေဲက ထကျဝကျလောကျကို သိမျးပိုကျထားပွီ ဖွဈသလို ကာဘူးလျ မွို့တျောကိုပါ သိမျးဖို့ လုပျနတောတှရေ့တဲ့ အတှကျ အာဖဂနျနိုငျငံရဲ့ အခွနေဟော ဆိုးလာနတေယျလို့ လညျး အတှငျးရေးမှုးခြုပျက ပွောပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ မွို့ကွီးပွကွီးတှမှော ပဋိပက်ခဆကျဖွဈနေ တာဟာ ပွညျသူအမြားအပွား သကွေေ ဒဏျရာရဖို့ ဖွဈလာနိုငျတယျလို့ သတိပေးလိုကျပွီး ပါဝငျ ပတျသကျနသေူတှေ အားလုံး အရပျသားတှကေို အကာကှယျပေးကွဖို့ပါ တောငျးဆိုလိုကျတာပါ။
အာဖဂနျနဈစတနျမှာ ဖွဈပှါးတဲ့ တိုကျခိုကျမှုတှကွေောငျ့ ပွီးခဲ့တဲ့ တလအတှငျး အရပျသား ၁၀၀၀ ကြျော သဆေုံးခဲ့ရပွီး လူပေါငျး ၂ သိနျးခှဲလောကျ အိုးအိမျစှနျ့ခှါထှကျပွေး နကွေရတာ ဖွဈပါတယျ။
အာဖဂနစ္စတန်နိုင်ငံကနေ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေ အမြန်ဆုံးထွက်ခွာကြဖို့ သံရုံးသတိပေး